Fujian idzva akakonzera kubatana kwe boka kambani yakatanga muna 1980, girazi raanoziva chitoro, rakanyoreswa muna 1999 muna fujian fuqing, muzinda iri mu fuqing itsva akakonzera kubatana kwe Currencykuva Hong mubhizimisi mapazi maindasitiri park, iyo muridzi itsva akakonzera kubatana kwe girazi co., LTD., Fujian Fuzhou akakonzera kubatana kwe itsva girazi co., LTD., fujian akakonzera kubatana kwe itsva simba michina co., LTD. Uye Shanghai Fu indasitiri itsva simba michina co., LTD., Uye mamwe mapoka mana, anopfuura 1000 vashandi. Uyezve, uyewo anodzora mapoka maviri, akadai mumigodhi yemarasha uye Real Estate.
Main maindasitiri marefu-kuguma mapurani regirazi kugadzira uye kubudiswa, photovoltaic girazi kugadzira uye kubudiswa, photovoltaic module, photovoltaic simba chiteshi, nezvimwewo, muunganidzwa yakaderera-e zvemapuranga regirazi, rezuva photovoltaic girazi substrate girazi, girazi kugadzirwa uye kubudiswa zvakadzika yepamusorosoro emakambani, ndiyo girazi kubudiswa pamusoro 30 emakambani mu China.
kambani Group vatambure kubva "nokushanda zvakaoma, akazvimirira kukura uye liquidity kutarisirwa" ari chinyakare kuunganidza kuti "vanhu vaifarira yezvesayenzi utariri, utsanzi utariri" iri inogona kuenderera mberi kwacho, yagara rwakatsaurirwa kuna vanogara hunakidze uye akakwana munda regirazi kugadzira. Zvino ane yemhando kugadzirwa zvokushandisa, chirimwa, akasika rakaisvonaka basa, zvakatipoteredza mupenyu, pave rakaisvonaka utariri uye michina vashandi, nokusika kugonesesa chaitwa, mukuru unhu girazi zvigadzirwa, kuchengeteka, simba okuponesa, kudzivirirwa kwezvakatipoteredza vakasvika nyika mureza. Pakati pavo, kuti mubhizimisi mamiriyoni 200 Currencykuva muna 2009 ichangovakwa kamari-e unhani dzaFord, uye shandisa mari Currencykuva mamiriyoni 300 muna 2011 akavhura zuva uchanyangadika Vhoriyamu matani 550 Ultra Calendar photovoltaic girazi kugadzirwa mitsetse, uye anotsvedzerera kuvesa kugadzirwa kutanga 2016, gore negore goho pamusoro m2 mamiriyoni 18 (3.2 mm), anogona kupa wedzera zvaidiwa 2 BSN pamusoro rezuva simba photovoltaic rezuva Ultra Mabhuku eBraille regirazi, izvi muna fujian mudunhu rechipiri pakukura pv dzaFord.